Uyisusa njani i-animation kwiDock xa siyikhetha ukuze sizifihle | Ndisuka mac
Ukuba usifunda ixesha elide uya kwazi ukuba siphawule amaxesha amaninzi ukuba inkqubo yokusebenza ye-Mac, imacOS yangoku inamathuba amaninzi okuqwalaselwa konxibelelwano lomsebenzisi kodwa elinye inani elikhulu lohlengahlengiso lifihliwe kwesiqhelo Umsebenzisi kunye neinjineli Isoftware ye-Apple ivumela ukuguqulwa kwayo kwiXesha elinemiyalelo.
Namhlanje sifuna ukukubonisa ukuba yeyiphi imiyalelo onokuyisebenzisa ukuze ukwazi ukuguqula indlela yokuziphatha yoopopayi eneDock kwesona sikrini siphambili xa sikhetha ukuzifihla kwiipropathi zeDock.
Njengoko sele uyazi, i I-Dock yinxalenye esisiseko yenkqubo ye-Mac kwaye yindawo apho sifumana ukufikelela kwe-Finder, usetyenziso esilusebenzisa kakhulu kwaye emva kokuhlulahlula ibar ngasekunene kunokwenzeka ukufumana indawo ezinje ngencwadi yamaxwebhu okanye ifolda yokukhuphela, phakathi kwezinye izinto ezininzi .
Ukuba sifuna ukuguqula indlela yokuziphatha kweDock esinokungena kuyo I-LauchPad> Ukukhetha kweNkqubo> iDock. Ibhokisi yokugqibela iyasivumela ukuba siyifihle ngokuzenzekelayo iDock ngelixa singayisebenzisi ukufumana indawo kwiscreen kwaye kunjalo Ngamanye amaxesha iikhompyuter ezinjenge-12-intshi iMacBook zifuna indawo encinci ehlala kuyo.
Nangona kunjalo, xa iDock ifihliwe ngokuzenzekelayo, iyakwenza oko ngoopopayi kubasebenzisi abaninzi kubonakala ngathi kuhamba kancinci kwaye ngamanye amaxesha kukwenza ukuba ulinde oopopayi ukuba badlale. Ukuze ukwazi ukuphelisa le mifanekiso, kufuneka ufake umyalelo kwiXesha:
Ukungagqibeki kubhala com.apple.dock i-autohide-time-modifier -int 0; killall Dock
Xa usenza lo myalelo, iDock iya kuqala ngokuzenzekelayo kwaye siya kuba nokufihla ngendlela ekhawulezileyo kwaye ngaphandle kopopayi.
Ukuba ufuna ukubuyela ku sebenzisa oopopayi ethekwiniUmyalelo ekufuneka uwusebenzisile ngu:
Ukungagqibeki kucime com.apple.dock i-autohide-time-modifier; killall Dock
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » Mac Sierra » Uyisusa njani i-animation kwiDock xa siyikhetha ukuze sizifihle